Lelee oku a ka emee ihe! | Martech Zone
Lelee oku a ka emee ihe!
Thursday, July 10, 2008 Tuesday, October 30, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-agụ nzipu ozi a na ndepụta m ma ọ bụ ozi-e, hụ na ịpịrị aka na ya biputere maka oku!
Otu n'ime ihe ịma aka dị na Industrylọ oriri na ọụtaụ Restaurant na-arụ ọrụ na ndị folks na-enweghị oge iji nwalee ahịa ha ma ọ bụ jiri teknụzụ egwu mgbe ọ bụla ha kwesiri. Obi dị anyị ụtọ, Onye isi ahịa anyị, Marty Bird, na-enyere ndị ahịa anyị aka idozi ọdịiche ahụ na akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa jupụtara na ozi.
N'ime akwụkwọ akụkọ anyị kachasị ọhụrụ, Marty kwuru banyere mkpa ọ dị ịkpọ oku ka ọ rụọ ọrụ. Y’oburu n’inwe otu peeji na webusaiti gi, ma obu otu email nke n’apughi, na-akpoghi oku ime ihe - n’ezie i ghaghi ohere igbanwe ndi ahia.
Fọdụ ndị folks chere na callouts bụ naanị cheesy nkịtị, mana ha na-arụ ọrụ. Ha na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọkwa.
Ebumnuche 3 Mere Oku Ji Mee Ọrụ:
usability - Ọ bụrụ na e mebere ibe gị nke ọma, yana obere ihe ndọpụ uche, mkpọsa ga-enweta uche nke ndị ahịa - na-eme ka o doo anya ebe ha nwere ike ịpị ịnyagharịa, budata, denye aha, wdg. Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịnweta nleta onye ọbịa, wee tufuo ha n'ihi na ha amaghi ebe ozo ozo.
Nhọrọ - Dị nnọọ ka ihe dị mkpa, ndị ọbịa ga-abịakarị na saịtị gị maka na ha rutere ebe ahụ site na ọchụchọ, ọ dị mkpa ịnye ha ụzọ iji gaa n'ihu mmekọrịta gị. Ha nwere ike ịchọta ihe ha na-achọ, mana ịnye ha ihe ọzọ nwere ike ime ka ha laghachite!
ọchịchọ ịmata - Onwere ụfọdụ ndị ọrụ chọrọ ịpị ihe. Inye ezigbo obi uto nwere ike inye ha ebumnuche ha na-achọ. Ọzọkwa, ọ nwere ike iwetara gị ọrịre ọhụrụ.
Ọ bụrụ na oku ị na-eme ihe na iji obi ike wee ghara ịdị na ndepụta ndenye gị mgbe ị na-eke weebụsaịtị ma ọ bụ email, gbaa mbọ tinye ya taa.
Ezi akụkọ: dobe data? Pịa… Doh!
Ikpebi Ngwaahịa, Ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ
Jul 28, 2008 na 4: 49 AM
Nnukwu ndụmọdụ. Na isiokwu nke ọdịnaya email achọpụtara m na nke a bụ ezigbo akụ bara uru, yana ọtụtụ ndụmọdụ na isiokwu nwere nghọta:
Jul 28, 2008 na 9: 36 AM
M tinye kwukwara na akụ na Google Knol m dere na Email Marketing!